काउटिन्हो बने पेलेको कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने पहिलो खेलाडी ! -बिगुल न्यूज
काउटिन्हो बने पेलेको कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने पहिलो खेलाडी !
असार १५, २०७५ NK-Bigul Media
मेस्को (एजेन्सी)– ब्राजिलयन प्ले मेकर फिलिप्पे काउटिन्होले विश्व कपमा महान खेलाडी पेलेले बनाएको कीर्तिमानलाई बराबरी गरेका छन् । रसिया जारी विश्व कपमा ब्राजिलका लागि सबैभन्दा प्रभावशाली प्रदर्शन गरिरहेका काउटिन्हाले सर्बियाविरुद्धको समूह चरणको अन्तिम खेलमा आफ्नो जादु देखाएका थिए ।
उनको पासमा पहिलो गोल भएको खेल ब्राजिलले २–० ले जित्यो र आफ्नो समूहमा शीर्षस्थान रहँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्यो । पेलले सन् १९५८ को विश्व कपका सुरुवाती ३ खेलमा २ गोल र १ असिस्ट गरेको कीर्तिमानसँग काउटिन्होले बराबरी गरेका हुन् ।
पेले पछि ब्राजिलका लागि यस्तो सफलता हासिल गर्ने काउन्टिहो पहिलो खेलाडी हुन् । ब्राजिलले कोस्टा रिकालाई २–० ले हराउँदा काउन्टिहोले पहिलो गोल गरेका थिए । अर्को गोल नेयमारले गरेका थिए । समूह चरणमा स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध ११ को बराबरीमा पनि कोउटिन्होले गोल गरेका थिए । ब्राजिलियन सहकर्मी पाउलिन्होले काउटिन्होको प्रशंसा गरेका छन् ।
‘म खाली ठाँउ खोजिरहेको थिए । त्यसैको बीचमा पहिलो गोल सम्भव भएको थियो । काउटिन्होले निकै स्तरिय असिस्ट गरे । जसका कारण म गोल गर्न सफल भए,’ पाउलिन्हाले भने, ‘हाम्रो गोलकै कारण हामी अन्तिम १६ मा पुग्न सफल भयौं । म जर्मनीका बारेमा चिन्तित छैन र के भयो त्यो बारेमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्न । ‘
७ अंकसहित समूह इको विजेताका रुपमा ब्राजिल नकआउट चरणमा पुगेको थियो । टिटेको टोलीले जुलाई २ मा मेक्सिकोसँग प्रिक्वार्टरफाइनल खेल्ने छ । ब्राजिल रसिया विश्व कपको दाबेदार मध्ये एकका रुपमा हेरिएको टोली हो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असार १५, २०७५१०:४०
भोलिबाट विश्व कपको नकआउट चरण शुरु हुने ! हेर्नुहोस् प्रिक्वार्टरफाइनलका खेल नेपाली समय अनुसार !
मेसीसँग जर्सी साटेपछि प्लेन दूर्घटनामा बाँचेका ब्राजिलियन खेलाडीले पाए मेस्सीबाट उपहार
वर्षा रोकिएसँगै हङकङमा घाम देखियो, खेल बाह्र बजेपछि मात्रै सुरु हुनसक्ने
यस्तो छ नेपाल र यूएई बिचको आजको खेल (लाईभ भिडियो)
क्रिकेट खेलाडी संघकाे महासचिवमा पारस खड्का – हेर्नुस को-को छन् समितिमा
३ नेपाली फुटबल खेलाडी युरोपीयन क्लबमा अनुबन्धित
बार्सिलोना फ्यान क्लब चितवनले गरे अनाथहरुलाई सहयोग